IYoink ye-mac ngoku ibandakanya inkxaso yebhodi eqhotyoshwayo | Ndisuka mac
IYoink ye-mac ngoku ibandakanya inkxaso yebhodi eqhotyoshwayo
Yoink ye-Mac sisicelo esivumela ukuba sirhuqe phantse nawuphi na umxholo kwisithuba esenziwe sisicelo. Singazithumela kamva ezi fayile kwi-imeyile okanye uxwebhu. Ukwenza le nyathelo kulula njengokucela usetyenziso kwaye indawo encitshisiweyo iya kuvela kwinxalenye yescreen esiyilungisileyo, ukutsala umxholo apho. Kuhlaziyo olufunyenwe namhlanje, sinokongeza umxholo kwibhokisi yeYoink, ngqo kwibhodi eqhotyoshwayo. Ukuba uncamathisela iphepha lewebhu kwiYoink eyehlayo, umfanekiso uya kubonakala njengefayile yeTIFF.
Enye into entsha esinayo kule nguqulo intsha kukuhambelana nayo IPopClip, Emva kokufaka iplagi kukhetho lwesicelo. Kodwa ayibandakanyi imisebenzi emitsha kuphela, nayo iphucula uzinzo lweapps ngokubanzi. Kwizicelo ezithile ezinje ngeMacOS High Sierra Imiyalezo kunye neMeyile, ukufana, ForkLift, Keka, Horos, Yoink isebenza ngcono. Umqondiso wokutsala uphuculwe, ukunqanda iingxaki ukusukela ngohlaziyo lwe-MacOS High Sierra.
Sine-3.4 yesi sicelo sexesha elide siphuma kwiVenkile ye-Mac, ekhutshwe okokuqala ngo-2011. . Sisicelo esihlawulelweyo, kodwa ixabiso laso lisengqiqweni, € 7,99 ukuba uyisebenzisa ngamandla kwimihla yakho. Kule vidiyo ilandelayo, unokujonga ukusebenza kukaYoink, ukuvavanya ukuba kuyahlawulwa na ukuhlawulwa.
Unako khuphela Yoink ngqo kwiVenkile yeMac Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IYoink ye-mac ngoku ibandakanya inkxaso yebhodi eqhotyoshwayo
Fumanisa zonke iimfihlelo zesibhakabhaka ngeSkySafari yeMac
UPaul Otellini, owanceda ukutshintsha kwiiprosesa ze-Intel, usweleke eneminyaka engama-66